Jabuuti oo diidey in dalkeeda laga diro ciidamo Maraykanku ku qasayo Itoobiya - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Kadib markii shalay afhayeen u hadlay milatariga Maraykanka uu sheegtay inay diyaar u yihiin inay caawiyan Tigreega oo ciidana ka diraan Jabuuti ayaa dawlada Jabuuti aad u cadhootey. ”Jabuuti marnaba loo adeegsan maayo arin sidaasa.
”Ninkaa sarkaalka ah ee hadlay wuxuu sheegay inuu daadgureynayo dadkiisa iyo weliba ka jawaabida arimaha argagixisada ee macnaheedu maaha in dal jaara lagu duulayo ayuu yiri wasiirka arimaha dibedda ee Jabuuti.
”Jabuuti marnaba ogolaanmayso in dalkeeda looga duulo dal jaara ayuu raaciyay hadalkiisa. Saxaafada reer galbeedka oo aad u buunbuunisa hadalada ay sheegaan reer galbeedku ayaa warkan u fasirtey in Jabuuti diyaar tahay in laga duulo dalkeeda.
”Way naga go’an tahay inaan qadarino xiriirka aan la leenahay wadamada jaarka ah ayuu yiri wasiirku. Maraykanka ayaa aad u taageersan Tigreega wuxuuna rabaa inuu ku soo noqdo xukunka Itoobiya taasina ma dhacayso.
Waxa maanta uu soo direy madaxweynaha Kiiniya oo Cabi Axmed ku soo dhaweeyay garoonka. Itoobiya ayaa rabta in Tigreegu hubka dhigo isna dhiibo ogolaadana in la xukumo.